World fitaovana ny andro dia ankalazaina isan-taona manerana izao tontolo izao amin'ny 1St Desambra hanangana fanentanana ny besinimaro mikasika ny SIDA (Nahazo Syndrome Immuno Sasany). SIDA no areti-mifindra noho ny aretina nahatonga ny aretina ny Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH). Ny andro ankalazaina ny governemanta fikambanana, fikambanana tsy miankina, fiarahamonim-pirenena sy ireo manam-pahefana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fikarakarana ny kabary na ny sehatra fiadian-kevitra fifanakalozan-kevitra mifandray amin'ny SIDA.
Ny Filohan'ny United States nanambara ofisialy World fanambarana ho an'ny SIDA andro isan-kerintaona 1995 izay nanomboka nanaraka ny firenena hafa rehetra manerana izao tontolo izao. Araka ny gony tombany, manodidina 25 tapitrisa ny olona maty amin'ny 1981 ny 2007 noho ny VIH. Na dia taorian'ny antiretroviral ny fidirana ny fitsaboana amin'ny toerana maro, manodidina 2 tapitrisa (farafaharatsiny 270,000 tanteraka dia ny ankizy) in 2007 dia voan'ny areti-mifindra io aretina.
World SIDA fankalazana andro lasa fantatra indrindra ara-pahasalamana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena. World SIDA andro fankalazana manan-danja manome ny fahafahana ny fikambanana ara-pahasalamana mba hampitomboana ny fanentanana eo amin'ny olona, izay azo atao indrindra fahafahana hahazo ny fitsaboana ary koa ny mifanakalo hevitra momba ny fisorohana fepetra.
WORLD SIDA DAY 2017
World Sida Day 2017 dia hankalazaina amin'ny Zoma, amin'ny 1St Desambra.
ANDRO ERAN-TANY SIDA FIAINANY TALOHA
World SIDA voalohany Day visualized ny Thomas Netter sy James W. Bunn tamin'ny volana Aogositra in 1987. Thomas Netter sy Jakoba W. Bunn samy mpiandraikitra vaovao ny vahoaka noho ny SIDA ao amin'ny Global Program WHO (World Health Organization) in Geneva, Soisa. Efa nizara ny hevitra momba ny SIDA andro Dr. Jonathan Mann (Mpitantana ny SIDA Global Program), izay efa nanaiky ny hevitra sy ny soso-kevitra ny andro fankalazana World SIDA tamin'ny 1St Desambra isan-kerintaona 1988.
World SIDA andro dia nanapa-kevitra ny fankalazana azy hankalazaina isan-taona amin'ny 1St Desambra araka ny marina. Nihevitra izy ireo fa nanapa-kevitra dia tokony ho lavitra ny fifidianana ny fotoana, Noely fialan-tsasatra na fety hafa. Tokony hankalazaina mandritra ny fotoana sy ny fampitam-baovao ny olona afaka mandoa liana bebe kokoa sy tsara amin'ny fandefasana ny vaovao rehetra manerana izao tontolo izao.
Ny Joint Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny VIH / SIDA, fantatra koa amin'ny hoe ny ONUSIDA, dia tonga nanan-kery tao amin'ny taona 1996 ary nanomboka fampiroboroboana maneran-tany. Raha tokony ankalazaina ho andro iray ihany no, World SIDA Fanentanana natomboka ny ONUSIDA amin'ny taona 1997 mba hifantoka amin'ny fandaharana ny SIDA, tsara kokoa ny fifandraisana, aretina sy ny fisorohana ny aretina fanentanana mianatra ny taona iray manontolo.
Ao amin'ny hanomboka taona, Andro Eran-tany SIDA no lohahevitra nentina ampitahorana fotsiny mba ny ankizy ary koa ny tanora, izay fantatra taty aoriana amin'ny maha-fianakaviana aretina tahaka ny tavan'olona na sokajin-taona azo voan'ny VIH. Koa satria 2007, Andro Eran-tany SIDA dia nanomboka nampiseho iray malaza fanehoana SIDA fehy ny White House.
ANDRO ERAN-TANY SIDA FOTO-KEVITRA
ONUSIDA nanomboka nandamina Andro Eran-tany SIDA fanentanana mba hankalazaina miaraka amin'ny lohahevitra manokana isan-taona ho an'ny fanentanana maneran-tsara kokoa momba ilay aretina. Ireto manaraka ireto ny lisitry ny hendry rehetra, ny taona lohahevitra ny World SIDA Day:
Ny foto-kevitry ny taona 1988 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Communication".
Ny foto-kevitry ny taona 1989 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Tanora".
Ny foto-kevitry ny taona 1990 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Vehivavy sy ny SIDA".
Ny foto-kevitry ny taona 1991 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Zava-tsarotra ny fizarana".
Ny foto-kevitry ny taona 1992 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Community Fanoloran-tena".
Ny foto-kevitry ny taona 1993 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "MANATANTERAKA '.
Ny foto-kevitry ny taona 1994 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "SIDA sy ny Fianakaviana".
Ny foto-kevitry ny taona 1995 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Shared Rights, Shared Andraikitra ".
Ny foto-kevitry ny taona 1996 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "One World Ary ny anankiray Hope".
Ny foto-kevitry ny taona 1997 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Children hiaina ao amin'ny tontolo miaraka amin'ny SIDA".
Ny foto-kevitry ny taona 1998 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Force for Change: World SIDA Fanentanana amin'ny Tanora ".
Ny foto-kevitry ny taona 1999 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Mihainoa, Mianara, Live: World SIDA Fanentanana eo anivon'ny ankizy sy ny Tanora ".
Ny foto-kevitry ny taona 2000 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "SIDA: Men manova ".
Ny foto-kevitry ny taona 2001 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Izaho miraharaha. Ianao ve"?
Ny foto-kevitry ny taona 2002 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Sy fanilikilihana".
Ny foto-kevitry ny taona 2003 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Sy fanilikilihana".
Ny foto-kevitry ny taona 2004 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Ny vehivavy, Girls, VIH sy SIDA ".
Ny foto-kevitry ny taona 2005 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Stop SIDA: Hitandrina ny Fampanantenana ".
Ny foto-kevitry ny taona 2006 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Stop SIDA: Hitandrina ny Fampanantenana-andraikitra ".
Ny foto-kevitry ny taona 2007 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Stop SIDA: Tandremo ny Fampanantenana- Leadership ".
Ny foto-kevitry ny taona 2008 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Stop SIDA: Hitandrina ny Fampanantenana-Lead-hanome hery-Vonjeo ".
Ny foto-kevitry ny taona 2009 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Universal Access sy ny Human Rights".
Ny foto-kevitry ny taona 2010 Eran-tany ho an'ny SIDA fanentanana Day dia, "Universal Access sy ny Human Rights".
Ny loha-hevitra avy ny taona 2011 ny 2015 for World Sida fanentanana Day dia, "Fiezahana ZERO: aotra vaovao voan'ny aretina VIH. Zero fanavakavahana. SIDA Zero fahafatesana mifandray "
ANDRO ERAN-TANY SIDA ASA
Isan-karazany ny asa azo atao amin'ny andro World SIDA andro fankalazana mba hampitomboana ny fanentanana sy hizarana ny hafatra ao amin'ny foto-kevitry ny taona manokana. Tena ilaina mba hampitomboana ny fahatsiarovan amin'ny olona izay no tena lasibatry ny fandaharana. Ny sasany amin'ireo asa voasoratra eto ambany:
Community ara olona sy ny fikambanana dia tokony ho nifandray ny drafitra ny hetsika Andro Eran-tany SIDA, mba handamina ny fivoriana nomanina. Mety ho tsara nanomboka avy ao amin'ny toeram-pitsaboana ao an-toerana, hopitaly, sampan-draharaha ara-tsosialy service, sekoly, Vondrona mpiaro SIDA sy sns.
Ny zava-nitranga na ny tokan-tena filaharany ny fisehoan-javatra tsy miankina azo tapa-kevitra fa tsara kokoa ny fanentanana ny mpandahateny sy ny exhibitors alalan'ny sehatra fiadian-kevitra, famoriam-bahoaka, fahasalamana entanao, hetsika fiaraha-monina, finoana tolotra, matso, antoko sy ny andian-tsoratra sns.
Ny fanambarana ampahibemaso dia azo atolotra ny biraom-sampan-draharaha famantarana ny fanekena ho an'izao tontolo izao andro SIDA.
Red nahatsiravina dia tokony ho nanao na zaraina amin'ny hafa mba hanamarihana ny fanantenana ho an'ny sekoly, toerana na ny fiaraha-monina ny asa vondrona. Electronic nahatsiravina Azo zaraina any amin'ny fampahalalam-baovao sosialy.
Ny asa (toy ny DVD sy ny SIDA fampisehoana seminera) ny raharaham-barotra, sekoly, fitsaboana fikambanana, mpitondra fivavahana sy eo an-toerana dia tokony ho nampahery sampan-draharaha noho ny asa lehibe.
Ny fiareta-tory azo natao tao amin'ny zaridainam-panjakana ny vahoaka, na ny akaiky indrindra fahafahana misafidy izay mpihira, mozika, mpandihy, poety, tantara sy ny mpilaza ny hoavy sns afaka mizara ny hafatry ny SIDA amin'ny alalan'ny voly fampisehoana.
World SIDA vaovao Day dia azo zaraina amin'ny mampifandray izany ho any amin'ny vohikala ny fahafahana misafidy.
Ny zava-nitranga rehetra sy ny fiaraha-mientana nomanina dia tokony ho efa zaraina ny alalan 'ny e-mail, Newsletters, na ny fampitam-baovao ho tapakila elektronika.
Afaka mahafantatra amin'ny alalan'ny maneho ny fampirantiana, afisy, horonan-tsary, Afisy sy sary, bokikely ho an'ny VIH / SIDA sy ny sns.
World SIDA ny asa Day azo baovao be dia be avy hatrany vondron'olona amin'ny alalan'ny bolongana, Facebook, Twitter, na amin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy hafa tranonkala.
Mavitrika mandray anjara amin'ny vondrona hafa ny fankalazana ny Andro Eran-tany SIDA.
Ny fankalazana labozia dia azo natao tao amin'ny fahatsiarovana ny olona maty noho ny VIH / SIDA.
Mpitarika ara-pivavahana dia entanina mba hiteny zavatra ho an'ny SIDA tsy fandeferana sy ny fahafaham-boninahitra.
Ny fanompoana dia afaka hanombohana ny manome ny sakafo, fialofana, fitaterana, namana, fa ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH / SIDA. Afaka koa asaina eo amin'ny asa ara-tsosialy, fanompoam-pivavahana na asa hafa mba hampitombo ny fitondran-tena.
Tanjona ERAN-TANY SIDA DAY 2017
Ny tanjon'ny Andro Eran-tany SIDA fankalazana isan-taona ny tsara hanohana ny Mpikambana mba hanangana ny vaovao sy ny politika mahomby sy fandaharana, mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ary koa mba hampitomboana ny fahafahan'ny ny sehatra ara-pahasalamana mankany amin'ny VIH / SIDA. Ny sasany amin'ireo tanjona lehibe indrindra ao amin'ny World SIDA Andro Voatanisa eto ambany:
Hitarika ny mpikambana ho manerantany mampitombo ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny fepetra ho an'ny VIH / SIDA.
Mba hanolotra ny mpikambana iray ara-teknika fanohanana ny drafitra fampiharana ny fisorohana, mampaninona ary koa ny fitsaboana ny VIH / SIDA anisan'izany ny fizahan-toetra, torohevitra ny reny ny fampitana ny aretina ho an'ny zaza, IST fanaraha-maso sy ny fitsaboana antiretroviral.
Ho fantany ny olona momba ny fanafody antiretroviral na entana hafa, izay afaka manampy azy ireo hiady amin'ny VIH / SIDA.
Hampandraisana anjara ny mpiara vondrona ao amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny mahazo ny vokatra mahomby indrindra.
Hamporisika ny mpianatra bebe kokoa avy ao amin'ny sekoly, anjerimanontolo sy ny rafitra ara-tsosialy handray anjara amin'ny fifaninanana nokarakaraina ho an'ny SIDA.
Mba hampihenana sy mifehy ny isan'ny marary voan'ny VIH / SIDA ary koa mba hampaherezana ny mpiara vondrona for fimailo.
ANDRO ERAN-TANY SIDA teny filamatra, Nalaina sy hafatra (World SIDA DAY 2017)
"VIH / SIDA tsy misy fetra".
"Ny milalao Safe Sex no naka masina noho ny tsikera nihevitra fa tsy marina. Izany dia tsehatra izay tsy nanana SIDA, fa ny mpandray anjara niresaka momba ny fomba dia handeha hanova ny fiainany ".
"Kely fanampiana ny olona, lehibe fanampiana ny vahoaka ".
"SIDA dia tena mampalahelo aretina. Ny tohan-kevitra momba ny SIDA 'ny maha karazana famalian'Andriamanitra dia misy dikany izany ".
"Omeo ny ankizy ny fitiavana, hehy sy ny fiadanana, tsy SIDA ".
"Fantatro ny lehilahy iray izay nanan-kery izay nanolotra SIDA amin'ny vadiny, ary ny hany zavatra nataony dia oroka".
"Raha mitsara ny olona tsy manana fotoana ho tia azy ireo".
"Aoka isika hanolotra dokambarotra ho H.I.V./AIDS fa tsy afenina, satria ny hany fomba hanaovana izany hiseho ara-dalàna toy ny aretina toy ny TB, toy ny homamiadana, foana ho avy ka hanao hoe olona efa maty noho ny amin'i H.I.V./AIDS, ary ny olona intsony momba azy io ho zavatra miavaka ".
"Ny SIDA dia aretina izay sarotra ny miresaka momba ny".
"I may avy amin'ny SIDA, ary tsy nanao ny asa ny SIDA nandritra ny roa taona. Tena tezitra aho fa olona mbola mahazo io aretina io fa tsy misy olona afaka manome anao - tsy maintsy mivoaka haka azy "!
"Anaka efa matin'ny SIDA".
"Noho ny tsy fahampian'ny fanabeazana amin'ny SIDA, fanavakavahana, tahotra, tahotra, ary ny lainga Nanodidina ahy ".
"Tsy afaka mahazo avy amin'ny namihina SIDA, na ny tanany, na sakafo amin'ny namana".
"Ity zavatra SIDA dia somary mampatahotra. Manantena aho fa tsy mahazo izany ".
SIDA (-kery fanefitra tsy fahampiana nahazo aretina na Immunodéficitaire aretina) vokatry ny VIH (Virus de l'Immunodéficience olombelona) izay hanafika ny hery fanefitra ny vatan'olombelona. Ny aretina dia fantatra voalohany tamin'ny taona 1981. Izany no amantarana ny voalohany ny anaran 'SIDA amin'ny 27faha Jolay amin'ny taona 1982.
VIH mora mifindra azo avy amin'ny olona iray ho an'ny hafa raha toa ka efa nifandray mivantana mandrakizay tamin'ny alalan'ny mucous manify, ara-batana tsiranoka na rà. Ao amin'ny vanim-potoana teo aloha, nisy be dia be ny henatra ara-tsosialy ho an'ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH / SIDA. Araka ny tombana, izany dia efa nanamarika fa manodidina 33 tapitrisa no mitondra ny tsimokaretina VIH sy ny 2 tapitrisa no maty noho izany isan-taona.
VIH dia tsimokaretina izay mamely ny T-sela ny hery fanefitra, ary mahatonga ny aretina SIDA fantatra amin'ny anarana hoe. Izany dia hita ao amin'ny ranoka olombelona toy ny ra, tsirinaina, fivaviana tsiranoka, tratrany ronono ny marary izay azo nandalo ny hafa amin'ny alalan'ny fifandraisana mivantana toy ny fampidiran-dra, vava firaisana ara-nofo, amin'ny lava-pitombenana, fivaviana firaisana ara-nofo na mampiditra voaloto fanjaitra. Azo lasa any amin'ny zaza ny vehivavy bevohoka mandritra ny fanaterana na amin'ny alalan'ny sakafo tratra.
Nisy Avy ao amin'ny 19faha ary 20faha taonjato any amin'ny faritra andrefana-afovoany Afrika. Ny tena marina tsy misy fanafany fa misy afa-tsy ny Mazava ho azy fa ny aretina dia mety ho mampihena nidina ny sasany fitsaboana.
Famantarana sy ny soritr'aretin'ny VIH / SIDA
Ny olona iray mitondra ny tsimokaretina VIH / SIDA dia manana ireto famantarana sy ny soritr'aretina:
Sweats nandritra ny alina
fa, Matetika io aretina ny soritr'aretina voalohany dia nanjavona nandritra ny taona maro nandritra izany otrik'aretina VIH antony manimba ny hery fiarovana izay fanafany. Ilay marary tsy mahatsiaro misy soritr'aretina nandritra izany fotoana izany, ary toa salama.
fa, tamin'ny faramparan'ny dingana VIH (rehefa tsimokaretina mampihena ny hery fanefitra hiadiana ianao) dia hampivelatra ny olona amin'ny aretina SIDA. Olona manana aretina ny tara dingana nanomboka nampiseho ireto famantarana sy ny soritr'aretina:
fahitana tsy hay
sasatry ny manompo an'i maharitra
fanaviana (ambony 100f)
Aretim-pivalanana (fikirizana sy ny mitaiza)
Fotsy mangirana eo amin'ny lela sy ny vava
Esophagitis (mamaivay ny ambany lalankaniny linings)
Kaposi sarcoma, kanseran'ny ny vozon-tranonjaza, havokavoka, rectum, aty, lohany, vozony sy ny homamiadana ny hery fanefitra (lymphomas).
meningite, fanaintainan'ny atidoha sy peripheral neuropathy
Toxoplasmosis (aretina ny atidoha)
Misy ireo tantara izay nanitatra teo amin'ny fiaraha-monina momba ny fanampiana. Sida na oviana na oviana amin'ny alalan'ny tanana niely mihorohoro, mamihina, sneeze, nitsaharan'ny hoditra, na mikasika ny fampiasana izany trano fidiovana.
« Taratasy ho tonian-dahatsoratra momba ny fitrandrahana ala olana ny rano mandritra ny fotoanan'ny orana